प्रहरी नागरिक मैत्री बन्न सकेन : सुरेशविक्रम शाह, प्रमुख, ५ नं. प्रदेश प्रहरी « News24 : Premium News Channel
प्रहरी नागरिक मैत्री बन्न सकेन : सुरेशविक्रम शाह, प्रमुख, ५ नं. प्रदेश प्रहरी
कपिलबस्तु , ६ माघ । प्रदेश ५ प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरेशबिक्रम शाहले अपराध र अपराधी समृद्ध मुलुकका लागि बाधक भएकाले सतर्क रहन निर्देशन दिनुभएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तु परिसरमा नवनिर्मित भवनको सोमबार उदघाट्न गर्दै प्रमुख शाहले प्रहरी नागरिक मैत्री हुन नसकेको पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । महानिरीक्षक शाहले प्रहरी संगठन भित्रको कमी कमजोरी औल्याउँदै भन्नुभयो ‘ अनावश्यक रुपमा झुक्नु हुँदैन ,सम्रग अवस्थाको कुरा गर्दा सत्य र ईमान्दारितामा कमी आएको छ । यसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी जिम्मेवार बन्नै पर्छ । ’
नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउन नागरिकले मात्र नभइ नेपाल प्रहरीको पनि अहम भूमिका हुने भन्दै उहाँले प्रहरीको भूमिकालाई संकुचित गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले कपिलवस्तुमा बनेको नयाँ भवनले जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांँग्रेसका पूर्व सभापति सुधाकार पान्डेयले जनताले गरेको विश्वासबाट प्रहरी संगठन चुक्न नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै कपिलबस्तु जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक दिपशमशेर जबराले सम्पूर्ण कर्मचारी निष्पक्ष तथा इमान्दार बनेर जनता र राष्ट्रको सेवामा खट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
इरानमा कोरोना भाइरसको कारण राष्ट्रिय महिला खेलाडीको ज्यान गयो
आईभोमीको चारवटा मोडलका मोबाइल बजारमा
काष्ठमण्डप कप ए लेभल बास्केटबलको उपाधि मल्पीलाई
access_time 7:48 pm
access_time 7:41 pm
काठमाडौं १६ फागुन । डिफेन्डिङ च्याम्पियन मल्पी पाँचौं काष्ठमण्डप कप ए लेभल अन्तरकलेज छात्र बास्केटबल
रिया भण्डारी, काठमाडौं, १६ फागुन । काठमाडौंलाई धुँवा धुलोबाट मुक्त राखेर मास्क नै लाउनु नपर्ने